“Mas’uulliyadda Guud Ee Wasaaradda Cadaaladda” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Mas’uulliyadda Guud Ee Wasaaradda Cadaaladda”
W/Q: Axmed Ismaciil Cali (Axmed Kayse)
Akhristayaasha ixtiraamka iyo qadarinta mudan waxaan aad u jeclaystay inaan soo bandhigo masuuliyadda guud ee wasaaradda cadaaladda oo ku cad Law number 81/96 taasoo ka turjumaysa macnaha wadareed ee ay samaynayaan marka la isku darro Hay’adaha Bahda cadaaladda oo ah kuwo ka dhumuc iyo mugwayn bahda Garsoorka oo ka ah xubin noocyadda cadaaladeed ee bulshadu baahan tahay, haddaba aniga oo og in ay jiraan in badan oo arrintan xiisayn doontaa waxaan marka hore iskiin barayaa Wasaaradda Cadaaladda:- Wasaaradda cadaaladdu waa wasaarad Dastuuri ah sida ku cad Qodoka 105 aad ee dastuurka Qaranka JSLand waxaana masuuliyaddeeda guud noqonaysaa sidan:-
Cadaaladda Maamulka (Administration of Justice): Cadaaladan oo noqonaysa tan ku maamul si cadaalad ku dhisan waxay ku salaysnaanaysaa ka qaybgalinta bulshada ee arrimaha cadaaladda khuseeya,sida maamul daadejinta Bulshadda oo Hay’addaha fulinta cadaaladda sida Booliska kala shaqeeya nidaamka cadaaladda bulshadda (Community policing) oo saldhig u noqonaya in la sameeyo habka ka hortaga dambiyadda bulshada ( Social Criminal prevention measures) iyo Habka ka hortaga dambiyadda ee da’yarta (Juvenile criminal prevention measures),waxaa kale oo la abuurayaa Booliska Cadaaladda Caruurta.
Nidaamkan Ku maamulka cadaaladu waxaa uu jawaabo ka bixinayaa dhammaan cabashooyinka bulshada Somaliland ku dhaqan, iyo hay’adaha Xuquuqda Aadamaha ee wadaniga ah iyo kuwa shisheeyaha ahba, si waafaqsan nidaamka iyo shuruurcda Qaranka JSLand. Sidaas aawadeed waxay wasaaradda cadaaladdu siisaa Hay’adaha Xuquuqda Aadamaha, Xuquuqda caruurta,Xuquuqda dumarka (Lamaanaha), dhaqan-celinta, iyo dhamaan xirfadlayaasha mihnada xuquuqda Aadamaha (Human rights Advocate).
Nidaamka ku maamulka cadaaladu waa kan Wasaaraddu ku bixnayso ruqsada Mihnada Qareenimo oo nuxurkiisu yahay in si habsami ah oo cadaaladda waafaqsan laysugu dheelitiro cadaaladda Garsoorka, bulshaduna u hesho Qareen hufan oo aqoon iyo kartiba u leh mihnada u qareemaynta bulshadda .
Cadaaladda Garsoorka (Judiciary procedural Justice):
Maxkamadaha Hoose. Iyadoo Waaxda Garsoorku leh madax-banaanideeda qaanuuniga ah haddana tan maamulka dawliga ahi waxay saartay Wasaaradda Cadaaladda waajibaadka Maamulka Maxkamadaha Hoose ee dalka, taasi oo macnaheedu yahay in la diyaariyo dhammaan noocyadda shaqaale,Adeege,Gaadhsiiye,Ilaaliye,Kaaliye, Dhismayaasha Maxkamadaha,Qalabka Xafiisyadda,Stationeryga,Mushaharka shaqaalaha Hoose,Mushaharka garsoorayaasha Maxkamadaha Hoose taasi oo nuxurka ujeedadeedu yahay in cadaalad loo sameeyo bulshada oo muwaadinka si sharciga waafaqsan xuquuqdiisu u dhawrsanaato.
Xafiiska Xeer-Ilaalinta.(Booliska/Dambi-baadhista). Xafiisyadan oo ka tirsan hay’adaha sharci fulinta waxay wasaaradu uga masuul tahay inay dhisto awoodooda mid aqooneed iyo mid imkaaniyaadba waxaanay ku hogaamisaa fulinta siyaasada guud ee qarankan.
Ururadda Qareenadda:Ururada Qareenadu waa xubin muhiim ah oo ka tirsan bahda cadaaladda gaar ahaan waxay si toosa ula halgalaan Waaxda Garsoorka waana xubinlagama maarmaan ah oo aanay dacwadi shaqaaqayn la’aantood sidoo kalena waxay wasaaaradu masuul uga tahay inay ku hogaamiso siyaasada guud ee qaranka iyadoo dhawraysa madax-banaanida iyo karaamadda qareenada ee sharcigu siiyay, waana waajib in wasaaradu ilaaliso qofnimada qaanuuniga ah ee qareenka.
Gander and women justice : waxay wasaaradu arrintan kaga jirtaa kaalin aad u muhiim ah waxaanay diyaarin doontaa siyaasada cadaaladda ee lamaanaha,waxaanay awooda saari doontaa tan Haweenka. Si ay ugu sinaadaan sharciga hortiisa.
Cadaaladda Suluxa.(Restorative Justice) .Xafiisyadda Ma’duumka. Waxay wasaaradu arrintan ka samaysay si ay dadka ugu fududayso ku dhaqanka shareecadda islaamka waxay awood siisaa xafiiska hayadda shareecadda islaamka ee maduumka, siloogu dhamaystiro dacwadaha aan ciqaabtu ka dhallan ee la isla ogol yahay in la waafajiyo shareecadda islaamka sida kuwa kala xaqista nabada,jareexaadka,dhaxalka,heshisiinta dhinacyadda iskhilaafa. Waxaanay xafiisyadni leeyihiin awood shamaystiran oo wasaaraddu siisay, dhinaca kale waxaa dhiman oo wasaaradu ku hawlan tahay sidii loo dhaqaajin lahaa siyaasadii ay arrintani ku midho dhalli lahayd oo u baahan in si balaadhan oo mugleh looga wada qayb qaato.
Xafiisyadda Nootaayadda. Xafiiskan nootaayadda oo nuxurka looga jeedaa yahay in loo fudaydiyo bulshada cadaalad inay dhexdooda ka samaystaan(Social justice),xafiisyadani waxay fududeeyaan qoraaladda sharci ee bulshadu ku dhaqanto sida uu jideeynayo XeerLambar 81/98. Xafiisyaddani waxay is waafajiyaan heshiisyadda waafaqsan shareecadda islaamka iyo kuwa dhaqankeena waafaqsan waxaanay yeeshaan fylin xoogan oo qaanuuniya.
Xidhiidhka cadaalada Dhaqanka iyo tan suluxa. Sidaadaba waxay bulshadu ku naalootaa waa cadaaladda dhaqanka iyo tan suluxa ee shareecadda islaamka waxaanay wasaaradu iyadoo arrintan tixgelinaysa wadashaqayn toos ah la leedahay madax-dhaqameedka JSL iyadoo siisa tababar ku saabsan Xalinta khilaafaadka iyo cadaalada,Peace uducation, Restorative justice iyo shuruucda dalka ka jirtaba si aanay caqabad ugu noqon cadaaladda oo mararka qaar dhaqanku dhib ku hayo.
Cadaaladda dhaqancelinta. (Correctional Justice) Cadaaladan waxay wasaaradu u fulisaa laba nooc oo kala ah:- Cadaaladda Dayarta(Juvenile Justice): Children justice waxaana ku hawlan shaqaalaha wasaaradda, Ciidanka asluubta, waxaa gacanta lagu hayaa sidii loo dhamaystiri lahaa, majiraan xarumo u gaar ah da’yartu waxaana loo baahan yahay in Gobolkasta laga sameeyo Dugsi dhaqan celineed.
Cadaaladda dhaqan celinta Dadka Waawayn ee sharciga khilaafa(adult Prisons inmates): Waxaa wasaaradda hawshan u qaabilsan Ciidanka Asluubta waxaana fulan 12 Xabsi in kabadan oo lagu dhaqanceliyo bulshadda dambiilayaasha noqda kuwaas oo hadda shaqeeya . Haddaba hawlahaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin:- Hogaaminta waaxda cadaaladda ee Qaranka. Dejinta siyaasad cad oo ay kuwada hawlgalayaan dhamaan hay’adahaas cadaaladda ku hawlani. Dejinta qorshe cad oo ay ku hawlgalaan dhammaan waaxahaasi. Iskuduwida dhammaan hawlaha ay wadaan hay’adaha Cadaaladu haddii ay noqon lahaayeen kuwo samafal shisheeye,kuwo samafal wadaniya waa kuwo u yaalla Wasaaradda Cadaaladda.
W/qoray Axmed Ismaciil Cali (Axmed Kayse)